Na Misy Aza Ny Fifanenjanana, Fahombiazana ny Fetiben’i Jamaika 2017 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2017 14:05 GMT
Manana fifandraisana iray ifamahofahoan'ny fitiavana/fankahalàna amin'ny Fetibeny i Jamaika. Fanafàrana kolontsaina iray tamin'ny 1989, naorin'i Byron Lee, ilay Jamaikàna mpiangaly mozika, ary miteraka fihetsehampo miharoharo eny anivon'ny Jamaikàna maro izy io. Tamin'ity taona ity, taorian'ny andro iray nisian'ny orambe nivatravatra sy tondradrano tany amin'ny faritra maro tao amin'ny nosy, nahagaga fa tsara tampoka teo ny toetrandro tamin'io andro io. Betsaka lavitra noho ireo taona tany aloha ny fandraisana anjara, satria ny fianakaviana Lee, izay niverina namelona ilay fombandrazana hatramin'ny nahafatesany, dia nanolotra akanjo takabidy ho entina mampiakatra ny lentan'ny Bacchanal Jamaica, tamin'ny alàlan'ny tarika roa vaovao, Xaymaca sy Xodus.
Patria-Kaye Aarons, mpanao matoandahatsoratra, dia namelona indray ilay adihevitra momba ny mozika “soca vs dancehall” efa naharitra ampolo taonany:
@ArchibaldKeane @Petchary @djmillerJA @KemeshaKelly_ @BigBlackBarry Firifiry tamin'ireo olona maro nitaraina momba ny fitomboan'ny lazan'ny fetibe no nanatrika ny fetibe iray naharitra herinandro natao ho an'ny reggae
HWT dia fanafohezana ny Half-Way Tree square, toerana iray fifamoriana ao Jamaika.
Marobe ny Jamaikàna no nandray tamin'ny fony manontolo ilay Fetibe, ary dia nifaly fotsiny izao. Niparitaka be ireo sary maro avy amin'ilay lanonana. Nibitsika ny Jamaica Gleaner hoe :
#MasMania: Teboka tsangambato! Nampiakarin'ity mpifety ity hanana lenta iray hafa ny fetibe fanaovana diabe Xaymaca
#MasMania: Mandray ny Arabe Waterloo, St Andrew, ireo tariky ny Xaymaca
#MasMania: Vitany koa io! Miara-mizotra aminà tanora roa mpifety ny zokiolona iray ao anatin'ny Fetibe fanaovana diabe Jamaika – Jermaine Barnaby
3 herinandro izayBarbady